Ahoana ny fisafidianana ny cognac?
Natao fanomezana ho an'ny zana-tsambikin-dabozia izy io, ary ankehitriny dia mihabetsaka hatrany ny cognac. Saingy mba tsy ho tafiditra ao anaty korontana ianao dia mila mahafantatra izay brandy misafidy sy ny fomba hanaovana izany. Ary raha tsy natao hanolorana fanatitra ny zava-pisotro, fa amin'ny fampiasana trano, ny safidin'ny cognac dia tokony hanatona ny andraikitra rehetra.
Ahoana ny fisafidianana kony tsara?
Amin'ny fomba ahoana, inona no napetraka ato amin'ity hevitra ity? Angamba, eto dia ilaina ny miresaka momba ny kalitaon'ny kognosa, izay omen'ny mpanamboatra. Noho izany, ity vokatra ity dia tsy afaka ny ho mora - Ny orinasa famokarana cognac dia orinasa sarotra sy lafo. Noho izany, raha mifidy karazana brandy iray ianao, dia mila mandinika ny vidin'ny zava-pisotro sy ny toerana fividianana ianao - Tsy ho afaka hividy zava-miaina marina ny fivarotana madinika tsy manana sehatra manokana. Ny singa faharoa izay ilaina amin'ny fandaminana dia ny mari-pamantarana miaraka amin'ny famantarana ny mpanamboatra. Fantatry ny rehetra fa ny toerana nahaterahan'io zava-pisotro io dia Frantsa, saingy malaza koa ny cognac Armeniana. Noho izany raha tsy avy amin'ireo toerana ireo ny mpanamboatra, dia tsy azo inoana ny mifanitsy amin'ny lohan'io cognac io. Eny, ary mividy vokatra avy amin'ny mpamokatra malaza, afaka miaro ny tenanao somary. Eny, ary azo jerena ny maha-azo itokiana azy - ny mpikaroka malaza dia matetika mamoaka brandy ao anaty tavoahangy voalohany, izay mora fantatra amin'ny toeram-pivarotana fivarotana.
Ny fiheverana manan-danja iray mahakasika ny kalitaon'ny cognac dia ny fiaretany. Azonao atao ny mamantatra izany amin'ny alalan'ny famakiana ilay mari-pamantarana. Raha manapa-kevitra ny hividy ny cognac frantsay ianao, dia tadiavo ireto taratasy manaraka ireto eo amin'ilay labozia, izay hilaza aminao ny taona fisotro.
VS, de Luxe, Selection, Trois Etolies - ho an'ny cognac io marika io, ny lanja dia tsy latsaky ny 2 taona;
Superior - latsaky ny 3 taona ny fahanterana;
Vieux, Reserve, VSOP, VO- io marika io dia manondro ny fatran'ny 4 taona fara-fahakeliny;
Grande Reserve na VVSOP- amin'ny tavoahangy miaraka amin'ireo taratasy toy izany eo amin'ilay mari-pamantarana, ny cognac dia voatazona mandritra ny 5 taona farafahakeliny;
XO, Napoleon, Extra, Tres Vieux, Royal, Vieille Reserve - cognacs izay misy latsaky ny 6 taona dia miankina amin'ny marika.
Ireo no marika mahazatra indrindra, raha ny marina dia misy maro hafa. Etsy andaniny, tsy misy ny sokajy ho an'ny cognacs maherin'ny 6.5 taona, satria, araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana, dia tsy azo atao ny mifehy ny fampifangaroana ireny cognac ireny.
Ahoana ny fomba hifidianana kognà Armeniana marina?
Raha mieritreritra ny fomba hisafidianana kognà Armenianina tsara ianao, dia ho mora kokoa aminao izany, tsy mila mianatra lesona sarotra amin'ny literatiora latinina ianao, ary ny karazan-tsoratra maro dia kely. Eo am-piandohana dia handalo ny fanasokajiana isika, satria ny kognà Armeniana dia mety ho faharetana, faharetana na fanangonana.
Noho izany, rehefa misafidy kognà Armeniana mahazatra isika, dia mijery ny kintana isika, izany no isan'ireo izay miresaka momba ny taonan'ny fisotroana. Ny kintana dimy dia midika fa farafahakeliny 5 taona ny fambolena cognac. Ny fe-potoana farafahakeliny ny faharetan'ny cognac Armeniana dia 3 taona, avy amin'ny fanahin'ny fahantrana kely kokoa dia azo atao ny manao zava-pisotro misy brandy.
Raha miresaka kônage vitsivitsy isika, dia manamarika azy ireto manaraka ireto:
"KV (Cognac Aged)" dia midika fa ny taona amin'ity sotro ity dia tsy latsaky ny 6 taona;
"KVVK (Cognac Resistant Plus Qualité)", ny fahantrana toy izany dia tsy latsaky ny 8 taona;
"KS (Cognac Old)" - ny alika ho an'ny famokarana cognac toy izany dia notehirizina tao anaty barika nandritra ny folo taona farafahakeliny;
"OS (tena tranainy)" - manana faharetana mandritra ny 20 taona farafahakeliny ity cognac ity.
Ny kônôba noforonina dia ny zava-pisotro izay voatazona ao anaty tavoahangy na barika mandritra ny 3 taona farafahakeliny.
Ankoatr'izay, ny fofona kognà, na inona na inona safidy hofidiana, dia azo averina amin'ny fomba tsotra hafa. Ampodio ny tavoahangy. Raha latsaka avy any amin'ny faran'ny tavoahangy ny dian-drongony iray, dia efa antitra ny cognac. Raha vetivety dia mitsambikina ny rindrina, ny mpamokatra dia mety ho hafahafa amin'ny fahanterana. Tokony hijery tsara ihany koa ny kônôka iray, mamely vera. Tokony ho hitanao eo amin'ny fitaratra ny fingerprint, amin'ny alalan'ny rano, ary ny kôgôkina dia tsy maintsy mamaky moramora ny rindrina. Ary ity zava-pisotro masina ity dia mila fitehirizana tsara. Ny tavoahangy dia tokony hapetaka amin'ny sehatra, mba tsy hahatafiditra ny vovony amin'ny rivotra.
Apetra ho an'ny fofona ao anaty lafaoro
Manidina elatra ao anaty sauce-soy
Gazety fanamafisam-pahefana roa - ahoana no hisafidianana?
Voa ambolena - famokarana medikaly sy fanoherana
Kisoa ho an'ny pies - ny fomba tsara indrindra ho an'ny fikarakarana sakafo tsara ho an'ny sarda na siramamy
Ny aretim-pisefoana ara-pahasalamana - fitsaboana
Fiarandalamby kamboty amin'ny tananao
Ahoana ny fomba hamerenana ilay lehilahy-Libra?